Bariis - Wikipedia
Jaadyo badan oo ka mid ah Bariiska
Kani waa maqaal ku saabsan Bariiska, isticmaal kale fiiri "Bariis isticmaal kale".
Bariis (; ; ) waa siidh firiley ah oo ka baxa dhir loo yaqaano Oryza sativa (Bariiska Aasiya) iyo Oryza glaberrima (Bariiska Qaarada Afrika).
Bariisku waxa uu ka mid yahay cuntooyinka ugu badan ee dunida laga cuno gaar ahaan qaarada Afrika iyo qaarada asiya. Sida cilmi-baadhis aarkiyooloji ahi qeexday bani-Aademku waxay beeran jireen bariiska tan iyo 10,000 oo sano ka hor maantana waa 20% cuntada dunida. Bariisku waxa uu ka baxaa meelo kala duwan oo dunida ah, gaar ahaan dhulka roobleeyda ah ama biyo badan leh iyo caro aad u nafaqo badan. Geedka bariisku wuxuu u baahan yahay ugu yaraan lix bilood oo qorax heer-kulkeedu ka sareeyo 22 °C iyo biyo waraabin joogto ah. Waxaa jira noocyo badan oo bariis ah, taasi oo ku tiirsan deegaanka uu ka baxayo iyo cimilada, sidaas ay tahay noocyada bariiska waxaa saamayn ku leh farsamada warshadaynta. Cuntada bariisku wuxuu leeyahay kaarbonhaydarayd jidhka nooluhu u isticmaalo inuu awood ka dhigto. Inkasta ooy jiraan xanuuno yar-yar oo bariisku ku keeno noolaha, sida calool-taag, waxa daraasad 2008dii soo baxdey sheegtay in cunitaanka bariiska waqti aad u dheer keento kansarka caloosha (fiiri Caafimaadka iyo Nafaqada Bariiska).
Qaarada Aasiya, gaar ahaan wadanada Shiinaha iyo Hindiya ayaana ugu badan soo saarka bariiska aduunka.
1 Taariikhda Bariiska
2 Jaadyada Bariiska
3 Caafimaadka iyo Nafaqada Bariiska
3.1 Isticmaalka Bariiska
3.2 Nafaqada Bariiska
4 Soo Saarka iyo Ganacsiga Bariiska
Cilmi-baadhis la sameeyay ayaa waxay muujisey in bariiska beeran jireen dad beeroleey Shiine ah waqtiyadii u dhexeeyay 8,200 ilaa 13,500 sanno ka hor. Sidoo kale cilmi-baadhis aarkiyooloji ah waxay sheegtay in waqtiyadaasi laga beeri jirey webiga dooxada Yangtze ee dhulka-jooga-hoose ee wadanka Shiinaha. Waxay cilmi-baadhistu sidoo kale soo ban-dhigtey in qiyaas ahaan 5,000 sano ka hor bariisku ku fidey koonfur-bari iyo koonfurta qaarada Aasiya. Waqtigaas wixii ka dambeeyay bariisku si tar-tiib ah ayuu ugu fiday dunida inteeda kale. Sidoo kale meelo ku dhow webiga Nayjar ee qaarada Afrika ayaa laga beeri jiray bariiska ilaa iyo 3,500 sanno ka hor laakiin kuma fidin deegaanada kale ee qaarada ilaa laga soo gaadhay 2,700 sano ka hor. Dhulka Soomaalida wuxuu ku soo gaadhay bariisku si ganacsi isagoo si toos ah iyo si dadban uga imanaayay wadanada Hindiya iyo Shiinaha.
Bariiska laga beero Madagaskar
Waxa jira noocyo badan oo bariis ah taasi oo ku xidhan deegaanka uu ka baxaayo. Tusaale ahaan, Bariga Fog waxaa lagu yaqaanaa bariis yar-yar oo ka jilicsan noocyada kale. Inkastoo meelaha kulaylka badan bariisku ku baxo waqti dheer, sida caadiga ah bariisku waxa uu ka mid yahay dhirta sanadlaha loo beero. Geedka bariisku wuxuu koraa dherer 1.2 mitir ilaa 1.8 mitir taasi oo ku xidhan nafaqada carada iyo biyaha uu geedku helo. Geedka bariisku wuxuu ka bixi karaa meelo badan oo kala duwan laakiin waa lagama maarmaan in biyo waraabin fiican helo. Dhulka laga abuuro waxaa ka mid ah:
Dhulka joogiisu hooseeyo ee roobab fiican hela sanadka.
Dhulka joogiisu hooseeyo ee biyo socda oo waraabin fiican leh sida wabiyo ama harooyin biyo leh.
Dhulka biyo badaneyda ah ee biyuhu qarinayaan abuurka geedka bariiska.
Dhulka joogiisu sareeyo kaasi oon helin biyo badan. Bariiska noocan ah waxa loo yaqaan Bariis Qalalan.
Xeebaha Bada ee leh carro qoyan.
Dhulka Bariisku ka Baxo Dunida (cagaar)
Beeritaanka bariiska inta badan wuxuu aad ugu fiican yahay wadanada iyo gobolada leh shaqaale aad u jaban iyo roob badan. Marka la beerayo bariiska waxa ugu horayn lagu abuuraa midhaha dhul dabacsan oo laga shaqeeyay, ka dib waxaa lagu soo daayaa biyo fara-badan oo si ay u harqiyaan abuurka. Biyo badan ayaa la waraabiyaa abaqaalka ilaa uu ka dheeraado oo midho ka dhalo. Sidoo kale waxa la isticmaalaa sunta xasharaadka si looga ilaaliyo in abuurka dhaawac gaadho. Waqti hal sano gaadhaya ka dib waxa la soo jaraa midhaha ku yaala geedka bariiska kuwaas oo la galiyo warshado ka fiiqa dahaarka sare. Marka dahaarka ama qolofka sare laga qaado midhaha bariiska waxa soo baxa nooc loo yaqaano Bariiska Cowlan. Qaar ka mid ah bariiska cowlan ayaa dib loo galiyaa warshada oo maqaarka sare ka qaada markaas waxaa soo baxa Bariiska Cad. Bariiska Cad waa ka cimri dheer yahay nooca kale waana ka qaalisan yahay marka la kala iibsanayo, laakiin waxaa ka nafaqo badan oo ka caafimaad fiican Bariiska Cowlan oo qiimo ahaana ka raqiisan. Waxa jira shirkado ganacsi oo dib u farsameeya bariiska cad, mararka qaar xoogaa yar kariya si uu u jilco ka dib ku dara budooyin midabkiisa ka dhiga cadaan iyo waliba nafaqooyin. Bariiskani aad ayuu uga qaalisan yahay dhammaan noocyada kala duwan ee bariiska.
Caafimaadka iyo Nafaqada BariiskaEdit
Bariiska waxa laga cunaa meelo badan oo dunida ah haba u sii bataan wadanada dunida sadexaad ee qaarada Afrika iyo qaarada Aasiya. Bariisku waa 20% cuntada dunida, halka qamadiga yahay 19% iyo galleyda oo ah 5% cuntada dunida. In kastoo marka loo diyaarinayo bariiska cunto ahaan lagu daro waxyaabo badan oo mid ah hilib iyo khudaar kala duwan, hadana waxa jirta saameeyn wayn oo bariisku ku yeesho caafimaadka qofka cunaaya. Bariiska noocyo ka mid ah, gaar ahaan Bariiska Cad marka warshada ku jiro waxa lagu soo daraa budo cad oo loo yaqaano afka ingiriiska Talc taasi oo ka dhigta bariiska mid qurxoon oo aad u cad. Budadaasi talc loo yaqaano mudo dheer ka bacdi waxay keentaa xanuuno halis ah oo ka mid yahay Kansarka Caloosha.
Sida qaalibka ah midhaha bariiska waxay caan ku yihiin in la kar-kariyo oo loo cuno cunto ahaan laakiin waxaa jira siyaabo kale oo fara badan oo bariiska loo isticmaalo. Tusaale ahaan, bariiska ceeyriin waxaa loo isticmaalaa in laga sameeyo cabitaano badan oo ka mid yihiin caano bariis, boorash bariis iyo khamri bariis. Sidoo kale bariiska ceeyriin waxa laga sameeyaa burka bariiska taasi oo ah in la shiido ama la bur-buriyo midhaha bariiska.
Nafaqada Bariiska ku jirta 100g (3.5 oz)
Awood 1,527 kj(365 kcal)
Fiber cunto 1.3g
Tiamina (fiitamiin B1) 0.0701 mg (6%)
Riboflavina (fiitamiin B2) 0.0149 mg (1%)
Niacina (fiitamiin B3) 1.62 mg (11%)
Aashito pantotenico (fiitamiin B5) 1.014 mg (20%)
Piridossina (fiitamiin B6) 0.164 mg (13%)
Kaalshiyaam 28 mg (3%)
Xadiid 0.80 mg (6%)
Magniisiyaam 25 mg (7%)
Manganiis 1.088 mg (52%)
Fosforos 115 mg (16%)
Botashiyaam 115 mg (2%)
Sinki 1.09 mg (11%)
Soo Saarka iyo Ganacsiga BariiskaEdit
Maadaama bariisku ka mid yahay cuntooyinka maalin walba la cuno waa badeecad suuqeedu aad u kala socdo. Waxa jira shirkado aad u badan oo ka shaqeeya kaliya beerista, warshadeynta iyo beec geeynta bariiska kuwaas oo ka hoowl-gala dhammaan wadanada dunida. Sidoo kale bariisku wuxuu laf-dhabar u yahay dhaqaalaha wadamo badan oo soo koraya kuwaas oo u iib geeya wadanada jaarkooda iyo waliba suuqyada dunida horumartey. Wadanada wali dhaqaalahoogu korayo dhoofinta bariisku waa 95% dhaqaalaha eey helaan. Hindiya iyo Shiinaha oo kali ahi waxay soo saaraan kala badh bariiska aduunka. Guud ahaan, soo saarka bariiska aduunyadu wuxuu u korayaa si joogto ah oo sanadkii 1960kii wax soo saarka bariisku wuxuu ahaa 200 milyan tan, halka uu ka gaadhey 678 milyan tan sandkii 2009kii. Sadexda wadan ee ugu weeyn soo saarista bariiska sanadkii 2009kii waxay ahaayeen Shiinaha (197 milyan tan), Hindiya (131 milyan tan) iyo wadanka Indunisiya (64 milyan tan soo saartey).
20ka Wadan ee ugu Sareeya Dhoofinta Bariiska Dunida —2011
Koonfur Kuuriya 6.3
Siri Lanka 3.8
Rice​—Do You Prefer It Boiled or Raw?
↑ Risks of Talcum Powder. Preventcancer.com. Retrieved on 2012-05-13.
↑ fao.org (FAOSTAT). http://faostat.fao.org/site/339/default.aspx. Soo qaatay 2013-03-12. Maqan ama ebar |title= (caawin)
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Bariis&oldid=219405"
Last edited on 13 Oktoobar 2021, at 04:26
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 13 Oktoobar 2021, marka ee eheed 04:26.